Tag: bhizimusi diki crm | Martech Zone
Tag: diki bhizinesi crm
Outook Mutengi Mutengi: YeMahara Yekubata manejimendi App yeHofisi 365 Bhizinesi rePrimiyamu
Muvhuro, Ndira 8, 2018 Douglas Karr
Mumwe wandaishanda naye aibvunza kuti ndeupi mutengo usingadhuri wevatengi wehukama waangashandisa kune rake bhizinesi diki. Mubvunzo wangu wekutanga kumashure waive wei hofisi neemail chikuva chaaishandisa kutaura netarisiro yake nevatengi uye mhinduro yaive Hofisi 365 uye Outlook. Kutumirwa neemail kwakakosha kune chero CRM kuitisa (chimwe chezvinhu zvinoverengeka), saka kunzwisisa kuti mapuratifomu ari kutoshandiswa mukambani kwakakosha kudzikisa
China, Gumiguru 12, 2017 NeChishanu, Gumiguru 13, 2017 Douglas Karr
OneLocal ndeyeti yezvishandiso ekushambadzira zvakagadzirirwa mabhizinesi emuno kuti vawane akawanda vatengi kufamba-ins, kutumira, uye - pakupedzisira - kukura mari. Ipuratifomu yakanangana nechero mhando yekambani yebasa renharaunda, inotora mota, hutano, hutano, mabasa epamba, inishuwarenzi, zvivakwa, saloni, spa, kana maindasitiri ekutengesa. OneLocal inopa suite yekukwezva, kuchengetedza, uye kusimudzira bhizinesi rako diki, nematurusi echikamu chimwe nechimwe cherwendo rwevatengi. OneLocal's-based-tools zvishandiso zvinobatsira